Madaxweynaha oo xalay ka qeybgalay munaasabad lagu soo dhaweynayay R/wasaaraha”Sawirro” – Radio Muqdisho
Munasabad balaaran oo lagu soo dhaweeynayay R/wasaaraha cusub islamarkaana uu ka qeybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Xafladda oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay xarunta KMG ah ee maamulka G/Banaadir, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo lagu soo dhaweeynayay R/wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Muungaab ayaa munaasabadda ka jeediyay hadallo isugu jiray soo dhaweyn, hambalyo iyo mahadnaq, isagoo tilmaamay in R/wasaare Sharma’arke uu yahay shaqsi ka bixi kara howlaha adag ee horyaala.
R/wasaare Sharma’arke oo munaasabadda ka hadlay ayaa balan qaaday in uu dib usoo celin doono amaanki iyo bilicdii ay laheyd caasimadda Muqdisho.
“waxaan balan qaadayaa inta an xilka hayo inaan ku dadaalo sidii loo soo celin lahaa amaanka iyo bilicdii magaaladan, anigoo maamulka magaalada kala shaqeyn doona sidii magaaladan loogu soo celin lahaa ajaanibtii iyo Soomaalidii ka tagtay oo idil” ayuu yiri R/wasaaraha dalka.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabada soo xiray ayaa kula dardaarmay bulshada ineey la shaqeeyaan R/wasaaraha, isagoo kula dar daarmay ummadda Soomaaliyeed ineey muujiyaan dulqaad badan, isagoo u mahadceliyay baarlamanka.